Mobiles iri kacha arụ ọrụ nke Septemba 10 | Androidsis
Aaron Rivas | 13/09/2021 08:00 | Mobiles, Noticias
Dị ka ọ na -adị, AnTuTu na -eme akụkọ kwa ọnwa ma ọ bụ, kama nke ahụ, ndepụta nke ọdụ kacha ike n'ahịa, kwa ọnwa. Yabụ, n'ime ohere ọhụrụ a, anyị na -egosi gị ọnwa nke August, nke bụ nke ikpeazụ site na njiri mara wee kwekọọ n'ọnwa Septemba a. Ka ahụ!
3 Njirimara na nkọwapụta nke Xiaomi Black Shark 4 Pro, ekwentị kachasị ike taa
E gosipụtara ndepụta a n'oge na-adịbeghị anya, ma, dị ka anyị si pụta ìhè, bụ nke August gara aga, mana ọ na -emetụta n'ọnwa Ọgọst ebe ọ bụ na ọ bụ ọkwa kacha ọhụrụ na nso nso a, yabụ AnTuTu nwere ike inye nke a ntụgharị n'ọkwa ọzọ nke ọnwa a, nke anyị ga -ahụ n'October. Nke a bụ igwe kachasị ike taa, dị ka usoro nnwale si dị:
Dịka enwere ike ịkọwapụta na ndepụta ahụ anyị tinye n'elu, Black Shark 4 Pro na iQOO 8 Pro bụ anụ ọhịa abụọ dị na ọnọdụ abụọ mbụ, nwere isi 864.614 na 846.351, n’otu n’otu, na onu ogugu enweghi nnukwu onu ogugu n’etiti ha. Igwe ndị a nwere igwe eji agagharị agagharị Snapdragon 888 na 888 Plus sitere na Qualcomm, n'otu n'otu.
Onye nke atọ, nke anọ na nke ise nwere Nubia Red Magic 6 Pro, iQOO 8 na OnePlus 9 Pro, nke nwere 829.331, 821.963 na 820.950, n’otu n’otu, imechi ebe ise izizi na ndepụta AnTuTu.
Iji mechaa, ọkara nke abụọ nke tebụl mejupụtara Oppo Find X3 Pro (811.726), OnePlus 9 (809.801), realme GT (806.588), Xiaomi MIX 4 (806.058) na Vivo X60 Pro + (804.203), n'ime otu usoro, site na isii ruo ebe iri.
Mgbe Xiaomi Mi 11 Lite 5G, nke nọ n'ọkwa ọzọ ma jisie ike nweta akara dị elu nke 530.657, na mgbakwunye na Qualcomm's Snapdragon 780G na -akwado ya, Sọpụrụ 50 Pro, nke Snapdragon 778G kwadoro, na -etinyekwa ya ọzọ n'ọkwa nke abụọ, yana akara nke 511.155. Iji megharịa n'ọnọdụ nke atọ, Sọpụrụ 50 sochiri ya, yana akara nke 506.774. Nke ikpeazụ na -arụ ọrụ na Snapdragon 778G.
Oppo Reno6 5G, Redmi 10X 5G na realme Q3 Pro enwetala ọnọdụ nke anọ, nke ise na nke isii., n'otu n'otu, na ọnụ ọgụgụ 484.857, 452.956 na 449.334. Oppo K9 5G nọ n'ọkwa nke asaa, nwere akara nke 447.193 isi.
IQOO Z3 na Huawei Nova 8 Pro nọ n'ọkwa nke asatọ na nke itoolu, na 440.460 na 438.795, n'otu n'otu. Onye mbu bu ama nke ejiri Kirin 985 di ike, ebe nke ikpeazu kwuru na on Chip. Ihe Huawei Nova 8, na Kirin 985 na ihe 436.073 a na-enweghị ike icheta echepụtara na nyocha ahụ, ọ bụ smartphone ikpeazụ na ndepụta AnTuTu.
Njirimara na nkọwapụta nke Xiaomi Black Shark 4 Pro, ekwentị kachasị ike taa
Black Shark 4 Pro bụ ama egwuregwu raara onwe ya nye nke nwere ihuenyo 6.67-inch Super AMOLED na mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,400 x 1,080. Na mgbakwunye, ihuenyo a nwere ume ọhụrụ nke 144 Hz, HDR10 yana nchapụta kacha nke nits 1,300.
Ngwaọrụ a dị elu na-eji nhazi Qualcomm Snapdragon 888, chipset nke dị n'okpuru mkpuchi wee rute oke elekere elekere nke 2.84 GHz, ewezuga inwe Adreno 660 GPU. N'aka nke ya, a na -egosi ekwentị n'ime ọtụtụ ụdị, nke nwere ike ịbụ 8, 12 ma ọ bụ 16 GB na 256 ma ọ bụ 512 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, nke enweghị ike ịgbasa site na kaadị microSD.
Ọzọkwa, Xiaomi's Xiaomi Black Shark 4 Pro na -anya isi sistemụ igwefoto n'azụ nwere okpukpu atọ isi modul 64 MP nwere oghere f / 1.8, ihe mmetụta igwefoto 8 MP nke abụọ nwere oghere f / 2.2 maka foto akụkụ obosara yana onye na-agba egbe 2 MP ikpeazụ nwere oghere f / 2.4 maka foto nnukwu. Na mgbakwunye na nke a, ọ na -abịa na igwefoto selfie 20 MP.
Ekwentị nwekwara a batrị nke Ikike 4,500 mAh. Nke a dakọtara na teknụzụ ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke 120 watt, nke nwere ike chajịa batrị n'ihe dị ka nkeji iri atọ na ntakịrị ihe.
Ọnụ na -abịa sistemụ jụrụ oyi dị elu ruo ọtụtụ awa egwuregwu, onye na-agụ akara mkpịsị aka n'akụkụ, Android 11 sistemụ n'okpuru Xiaomi MIUI 12.5 oyi akwa, mgbawa NFC maka ịkwụ ụgwọ enweghị kọntaktị, na ndị na-ekwu okwu stereo.
IKIRU 6.67-inch Super AMOLED nwere mkpebi HD zuru oke + yana ume ọhụrụ 144 Hz
Gbanwee CAMERA Atọ: 64 + 8 + 5 MP
UMUAKA 4.500 mAh na 120 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS A gam akporo 11 n'okpuru MIUI 12.5
Atụmatụ ndị ọzọ Sistemụ jụrụ oyi / ndị na -ekwu okwu stereo / ọnọdụ egwuregwu / onye na -agụ mkpịsị aka n'akụkụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mobiles iri kacha arụ ọrụ nke ọma na Septemba 10